Thursday January 16, 2020 - 19:20:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay fal dil ah oo ciidamo katirsan dowladda ay ugeysteen mid kamida odayaasha dhaqanka ee caanka ka ah gobolka Sh/Hoose.
Xalay fiidii ayay maleeshiyaadka dowladda ee Bangaraafta loo yaqaan waxay gudaha degmada Wanllaweyn ku dileen Nabadoon Axmed Xuseen oo kamid ahaa Odayaasha dhaqanka degmada.
Dadka deegaanka waxay sheegeen in maleeshiyaadka dilka geystay ah kuwa loo yaqaan Bangaraafta ay Nabadoonka rasaas ku fureen kadibna ay goobta isaga tageen, saaka markii uu waagu baryay ayay ehelka nabadoonka udacwoodeen maamulka degmada Wanllaweyn waxaana loo sheegay in lasoo xiri doono ciidamadii dilka geystay.
iyadoo maamulka degmada Wanllaweyn uu mashquulsanaa sidii loosoo xiri lahaa ciidamadii dilka geystay ayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Nabadoonka ladilay ku sheegtay madaxii qaraxyada Al Shabaab ee Sh/Hoose!.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dilka nabadoon Axmed Xuseen ay geysteen maleeshiyaadka loo yaqaan Danab ee Mareykanku ku tababaray garoonka diyaaradaha Balidoogle, maleeshiyaadkan ayaa sanad ka hor sidaan udilay Macallin caan ah oo Tafsiirka quraanka ka akhri jiray masaajidda degmada Wanlla weyn.